Warshadda Shiinaha ee Kinetic Pixel Ring iyo soosaarayaasha | Fyl
Bar Saddex Xagalka
Guddi Saddex geesood ah
Iftiin afar geesood ah
Kubadda Cagta LED
1 giraanta pixel ee 3 winches
Dhexroor 80 cm ah
Iftiinka RGB LED
132pcs 5050 RGB LED loogu talagalay giraanta pixel
DMX xarig culeys lugu koriyo
Cabirka (3m/6m): 304x247x167mm, Miisaanka: 7kg
Cabirka (9m): 324x277x167mm, Miisaanka: 7.5kg
Cabirka (12m): 354x317x167mm, Miisaanka: 8.5kg
Awoodda qaadista: 1.5kg
Xawaaraha qaadista: 0-1m/s
Danab: 100-240V AC, 50-60 Hz
Awoodda korontada: 250W
Xakamaynta: DMX 512
Taariikhda Gudaha/Dibedda: 3-pin XLR DMX
Awoodda/Dibedda: Xiriiriyaha Awooda
Faa'iidooyinka shirkadaha kirada ah: Waa mid aad u habboon oo dhaqaale leh in winch -ka DMX uu u dhigmay santuuqyadeenna kala duwan ee hoos yimaada awoodiisa qaadista. FYL waxay si tartiib tartiib ah u cusbooneysiin doontaa santuuqa cusub ee xulashadaada waqtiyo kala duwan.
Nidaamka nalalka Kinetic
Waxaan bixinnaa nidaamyada kinetic nalalka iftiinka ee u gaarka ah oo awood u siiya isku -darka kaamil ah ee nalalka iyo dhaqdhaqaaqa. Nidaamyada kinetic -ka ee iftiimiya ayaa ah hab fudud oo dhalaalaya oo kor iyo hoos loogu dhaqaajiyo shay iftiimay oo ah isku -darka farshaxanka iftiiminta iyo farsamada farsamada. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku siin karnaa adeegyo loo habeeyay hadba sida aad u baahan tahay.
Waxaan leenahay u samaynta ' waaxda la-aragnimada design mashruuca ka badan 8 sano. Waxaan bixin karnaa naqshad qaabeyn, Naqshad qaabeynta korontada, naqshadeynta fiidiyaha 3D ee nalalka kinetic ee mashruucaaga.
Waxaan leenahay injineero khibrad fiican u leh nidaamka iftiinka kinetic ee adeegga rakibidda mashaariicda kala duwan. Waxaan taageeri karnaa injineerada u duulaya meesha mashruucaaga si toos ah loo rakibo ama aan u diyaarinno hal injineer hagaha rakibidda haddii aad leedahay shaqaale deegaanka ah.
Waxaa jira laba siyaabood oo aan u taageeri karno barnaamijka mashruucaaga. Injineerkayagu wuxuu u duulayaa meesha mashruucaaga si toos ah barnaamijyo loogu sameeyo nalalka kinetic. Ama waxaan u samaynaa barnaamij-hore barnaamijyada nalalka kinetic-ka oo ku saleysan naqshadeynta kahor dhoofinta. Waxaan sidoo kale taageernaa tababarka barnaamijka lacag la'aanta ah ee macaamiisheena doonaya inay bartaan xirfadaha iftiinka kinetic ee barnaamijka.
Bar saddex geesle ah
Products Featured - Tags Hot - Sitemap.xml
Tube ogeed , 3D Saqafkii ogeed hoggaamiyo Stage Lights , Laydhka xarig culeys lugu koriyo , Dmx xarig culeys lugu koriyo hoggaamiyo ogeed Laydhka , Tube 3D 3D ogeed Lights , Dmx hoggaamiyo kor u Ball ,